Kodzero-dzevanhu, 28 Chikumi 2017
Chitatu 28 Chikumi 2017
Chirongwa cheZISO/ILIHLO Chorerutsira Vanenge Vashungurudzwa?
Chirongwa ichi, icho chinenge chichishandisa dandemutande, chinonzi chicharerutsira vanhu vanenge vashungurudzwa kana kuona zvichiitika kuti vazivise veruzhinji zvisina kutya kumbunyikidzwa.
Dare Ronzwa neChitatu Nyaya yeVadzidzi Vakadzingwa Mudzimba neMuvhuro paUZ
Magwaro asvitswa mudare neChipiri zvechimbi chimbi aitwa nesangano remagweta rinorwira kodzero dzevanhu, eZimbabwe Lawyers for Human Rights, akamirira mumwe mudzidzi, Clifford Charera, anobva kwaRusape.
Huku, Mazai Zvinobva kuSouth Africa Zvorambidzwa Munyika
Hurumende yeSouth Africa inonzi iri kupomera madhadha mhosva yekuparadzira chirwere ichi paanenge achi bhururuka pamadiro achiyambuka miganho yenyika mbiri idzi.
Pastor Mawarire Vanosungwa paUZ Vamwe Vadzidzi Vachiratidzira
Mufundisi Evan Mawarire vechechi yeHis Generation vasungwa paUniversity of Zimbabwe mushure mekunge vabatana mukuratidzira kwanga kuchiitwa nevadzidzi vepachikoro chepamusorosro vari kuita zvidzidzo zvehudhokotera.
Vanhu Vokurudzirwa Kusiyana neZvinodhaka
Mutevedzeri wemutungamiri weSADC Parliamentary Forum, uye vari nhengo yedare re Senate, Amai Monica Mutsvangwa, vati kuoma kwehupenyu ndiko kuri kukonzera vechidiki kuti vashandise zvinodhaka zvakanyanya.
Vari paMudyandigere Voronga Kusangana neNSSA Kuburikidza neSangano Ravakaumba
Vari pamudyandigere ava vagara vachinyunyuta kuti mari dzavari kupiwa neNSSA pamwedzi ishoma zvikuru, uye vamwe vanenge vafamba mitunhu yakareba vachienda kunotambira mari idzi, idzo vanosvikokundikana zvakare kutora kumabhanga nguva zhinji.